jiri nziga email gote cadi iTune nke USna Nigeria-MyGiftCardSupply
Gote Onyinye CadiiTune USA na Nigeria
Jiri PayPal chekwaba Cadi iTune ichoro
Nziga Onyinye Cadi iTunes na Nigeria
I bi na Nigeria na-enwe nsogbu ichota ma o bu gote Onyinye Cadi iTunesite na ebe atukwasara obi? I choro izuta egwuregwu na egwu ma choo ebe onu ahia ha di ala? Na shedi iTune nke USA, enwere egwuga na ihe egwuregwu adighi na shedi iTune nke Nigeria, oge ufodu, ha na adi oke onu!
Chekwaba ego ma mepee otutu ihe
Onyinye cadi iTune nke US ga-enyere gi aka mepee otutu ihe na olu ego di ala, ebe otutu ngwa ahia ka di olu ala na shedi iTune nkeUSkaria ka o di na iTune nke Nigeria.Tinyere ichekwaba, I ga-enwe ike ichekwaba ihe ndi I gaghara inweta ma jiri ya gorie gi na ndi enyi gi na ndi ezinulo gi.
Gote cadi iTune nke US site na ebe ntukwasi obi
O bu site na otutu afo ire onyinye cadi iTune ka MyGiftCardSupply ji nwee oke aha na ebe ndi ahia ya nan di enyi ya no maka ha na-eziga cadi bu okpokopii nke oma ososo site naemail. Site na ikwu ugwo nkePayPal, aga echekwaba ikwu ugwo gin a ihe nzuzo gi. I choo igote, ghoro onuego iTune nke ichoro, kpebie ma ichoro I gote otuugboro ma o bu dirigaba, tuo aka na “Gote Ugbua”, ma lezie anya. Oge adighi anya, I ga-egolibeihe di na shedi iTune nke United States .
[row][col span="1/2"] [/col][col span="1/2"]
0nyinye Cadi iTune nke USA(NzigaEmail)
[arc id=1554,1552,1549,1546,1499 english_notation=1] reviews
E ji m MyGiftCardSupply enweta Onyinye cadi iTune nke mgbe o bula m choro ya , ha na eziga ozi ngwangwa.
a choro m cadi onyinye iji gote ihe onyonyoo ma siti a bu ebe ano.
ebe ano maka izobe onye m bu nakwa ka m si akwu ugwo.
zite onye new ya
ekeleoo! Ebidoro m website a n’afo 2012 iji nyere ndi mmadu ebighi naUnited States I gote egwu na ihe onyonyoo nke US nakwa ihe ndi ozo n’uzo di mfe. O bu ihe na-agum eri oge ikeputa uzo di mfe eji acho ihe n’igwe na uzo kacha mma esi eleta ndi ahia anya.Anyi na-anabata ndi ahia site n’uwa niile, ya bu, golie atummatu anyi na Nigeria. O buru na inwere ajuju o bula, jiri ebe mkpoturu anyi I ga-ahu n’ala n’akuku aka nri ebe a kpoturu anyi. Ndewo maka itukwasa anyi obi di ka ebe nweta izizi gi n’ ihe gbasara inweta Onyinye cadi iTune nke US!
Ajuju maka Oninye cadiiTunes nke US
o ga-egbu oge izitere m cadiiTunesm site na Email?
I gote Onyinye cadi iTune site naMyGiftCardSupplydi ososo ma dikwa mfe! C chago Onyinye cadi nile oku na igwe ma zipu ha site na email. A ga-ebinye aka ma zipu ngwahia nile o bere oge igocharaha.
O buru na obu nke mbu gi igote, o ga-ewe anyi o bere oge iji wee tulee ngwa ahia gi. Ebinyechaa ya aka, a ga ezitere gi Onyinye cadi gi site na email.
kedu ihe m nwere ike iji Onyinye cadi iTune nke US gote?
I ga-eji Onyinye cadi iTune nke US meghee ma nwee ohere ije na oba iTune nke United States nke gunyere egwu iTune, apps, egwuregwu, akwukwo na ihe ndi ozo. O bughizi ka I na-eche ka ebupute egwu na-amasi gi. Tinye egwu ahu na igwe okwu gi ma golibe ya ozigbo.
A ga m egote cadi onyinye m ma werekwa ya mee ihe na Nigeria?
Anyi bidoro izu ahia a na 2012, yabu, anyi ga-eziga ndi ahia anyi ebighi na United States cadi onyinye iTune nke US. Na mmadu bi na Nigeria abughi nsogbu chaa. Oburu na I ga-eji PayPal gote ihe, anyi ga-ahu na anyi zigara gi Onyinye cadi iTune nke US na email gi.
kedu ka m ga-esi gbaputa cadi iTune na account m?
Uzo esi agbaputa cadi iTune na desktop:
●O buru na I banye na account iTune gi, pia aka n’aha gi.
●Site na ihe ga-aputa, ghoro“Gbaputa…”.
●Pinye akara iri na isii site na onyunyo onyinye cadi ezigara na email gi ma pia Gbaputa. (I nwekwaziri ike jiri onyonyoo site na computa ma o bu ekwenti giwellie ya elu ka oghara ide ihe.)
Ka I ga-esi gbaputa cadi gi site na akurungwaiOS:
●Pia ihe ngosi ga na mgbedata ihu akwukwo ahu.
●Hukwa na I banyego na account gi ma pia gbaputa.
●Pia were onyonyoo seta ihe onyunyo na desktop gi. I nwere ike ighoro iji aka tinye akara gi ma pia rachighaa azu.
Anyi nwekaaziri uzo di mfe nwere foto I nwere ike iso ma I choo enyemaakaozo
enwere m ike iji Onyinye cadi iTune nke US a mee ihe na account iTune m digoro?
Nke a bu Onyinye cadi iTune nke US, ya bu iga ahu na imepere account iTune nke US. A na-emepe accontiTune na obodo di iche iche, I ga-emepe account itune nke US.